Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Uruguay I-Federico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football eliyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Fede“. Indaba yethu yeFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube yimanje.
Ukuphila nokukhuphuka kweFederico Valverde. Ama-Image Credits: I-Elobserver futhi I-DailyMail
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungubani mdlali wethalente eliphezulu kakhulu, umgadli ongazange azuze nje izinhliziyo zabalandeli beReal Madrid. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abalandeli ababheka inguqulo yethu yeFederico Valverde's Biography ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
UFederico Santiago Valverde Dipetta owazalwa ngosuku lwe-22nd lukaJulayi 1998 kuyise, uJulio Valverde nonina uDoris Valverde edolobheni elikhulu laseMontevideo, e-Uruguay. UFede, njengoba ejwayele ukubizwa kanjalo, wazalwa njengengane yesibili kubazali bakhe abathandekayo aboniswe ngezansi.
Hlangana Nabazali bakaFederico Valverde- Ubaba wakhe, uJulio noMama, uDoris. Isikweletu Sezithombe: ovaciondigital
UFederico uvela emndenini ophakathi nendawo futhi ngokwenkolo, wakhuliswa ngabazali abangamaKristu angamaRoma Katolika azinikezele. Njenge Diego ForlÃ¡n, umsakazi webhola lomndeni unomndeni wakhe odabuka enhlokodolobha yase-Uruguayan iMontevideo. Ngenxa yokuthi inhloko-dolobha yase-Uruguay (Montevideo) yake yaba uMbuso WaseSpain wangaphambili (1724-1807), singasho ukuthi uFederico angaba nezimpande zoMndeni waseSpain.
UFederico Valverde uneMvelaphi yakhe yomndeni evela edolobheni laseMontevideo. Credits: theculturetrip kanye elobservador
UFederico Valverde akakhulelwanga yedwa eceleni kwabazali bakhe, kodwa futhi eceleni komfowabo omdala ohamba ngegama elithi Diego. Kwakuwumndeni ekuqaleni engazi lutho ngebhola, ngaphandle kwamalungu omndeni noma izihlobo ezibandakanyekile. Umdlalo uqale ngeyethu impela iFederico Valverde ngenkathi egqoke amakhabethe.
Njengabaningi bezingane zokugcina, uFrederico wayewuhlobo lomntwana owayecela noma yini futhi ayibone isenziwa ngomhlandla weminwe yakhe. Ngaleso sikhathi, akazange acele amathoyizi, kodwa ibhola kuphela. Njengomntwana (u-2 osekhulile), uFederico wenza ubaba wakhe ukuba abe yisipikili segumbi lokuhlala emndenini wakhe. Usuku nosuku, wayedonsa ibhola enetheni amahora amaningi, eshaya amagoli asekhaya. Angazi ukuthi ekuqaleni wonke umuntu wayazi ukuthi kwakuwuphawu lwekusasa lakhe.
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Eminyakeni ye-3, uFede wayenesifiso esijulile sokujoyina iqembu lebhola ekufuneni imfundo yezemidlalo. Ngenkathi esagqoka izimbotshana, abazali bakhe bamenza wabhaliswa ngempumelelo naye Izinsana zabafundi be-Union, isikole esincane edolobheni laseMontevideo. Yize wayengavunyelwe ukudlala imidlalo esemthethweni ngoba wayengafiki ku-6.
Eminyakeni emithathu, kumdlalo ongekho emthethweni, uFede washaya igoli lakhe lokuqala emdlalweni ongekho emthethweni wahlangana nenye i-academy egama linguDanube. Uthi bewazi?… Emgubhweni, umsubathi omncane wasusa izimbotshana zakhe ukumangaza abalandeli. Ngokwesinxephezelo sokuntuleka kwemidlalo esemthethweni, uFederico omncane kwesinye isikhathi wayethunyelwa njenge-mascot emaqenjini amakhulu.
UFiderico Valverde omncane wasetshenziswa njengeMascot ezinsukwini zakhe zokuqala. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram
Kancane kancane, uFederico wakhula futhi ngaleso sikhathi wayeseneminyaka engu-5, isifundiswa ngobukhulu baso sanquma ukumnika ithuba lokudlala ekuhlelweni kwe-academy okuhliselwe izingane ezineminyaka engu-6 nangaphezulu.
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ukuqonda isifiso somfana wabo sokuba ngumdlali webhola wabona abazali bakaFederico Valverde benza konke abangakwenza ukusekela izifiso zakhe. Ngesikhathi ajoyina, zazingekho izicathulo zebhola elincane kakhulu ngemilenze yakhe emincane. Unina kaFederico Valverde kwadingeka ahambele izitolo eziningi, ekugcineni, athole ezisetshenzisiwe enkundleni.
Ngenhlanhla, imizamo yaqala ukukhokhela le chap encane ezinyangeni zakhe ezimbalwa zokuqala zokudlala ibhola (ngaphambi kokuzalwa kwakhe kwe-6th). Uthi bewazi?… UFederico Valverde wasiza iqembu lakhe ekunqobeni indebe yakhe yokuqala yeChampionship ngonyaka we-2003 ngenkathi eseneminyaka eyi5
UFederico Valverde Iminyaka Yasekuqaleni Kwebhola kwi-Soccer- Trophy Yakhe yokuqala. Isikweletu Sezithombe: I-Elobserver
Ngivuswe ngokumelene nabadlali abadala kunaye futhi bayaqhubeka nokuphumelela ubuqhawe bakhe bokuqala esemncane ngeminyaka ye-5 wandise amathuba akhe wokufika kwizifundo ezinkulu.
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Ngonyaka we-2008, injabulo yomndeni wakwaValverde ibingazi mingcele lapho abizwa ngeFederico omncane ezothamela izilingo noPenarol, elinye iqembu lezemidlalo lase-Uruguay elivela eMontevideo. Waphelekezelwa ngumama wakhe ezivivinyweni.
Ngemuva kokusondela esifundweni sokubuthwa kwezingane, umfana onamahloni wakhothela esihlahleni futhi akazange asukume. Omunye wabasebenzi abaqeqeshi obhekele ukukhetha abadlali ukuthi bayohlolwa ngegama uNéstor Gonçalves waya kuFederico ethi; “Sawubona boy! kungani ungezi ukuzodlala? Dlala!“. UFederico (oneminyaka eyisishiyagalolunye) wasabela ngokushesha ezwini eligunyaziwe. Washesha wajoyina ezinye izingane ukuze azihlole.
UDoris, umama wakhe wabuka lo mkhuba futhi wezwa umqeqeshi ethi indodana yakhe iyingane engavunyelwe nakanjani izokwamukelwa. Lapho ezwa lokho, lo mama oziqhenyayo wahamba waya eNéstor Gonçalves ethi; 'UFede okhulume ngaye uyindodana yami'. Ngokushesha, umqeqeshi wabonga uDorin ngokumkhulisa kahle. Ngemuva kwecala eliphumelele, uFederico ofanekiselwe ngezansi wabhalisa no I-Peñarol.
Izithombe zeFederico Valverde ngemuva kwecala eliyimpumelelo ne-Peñarol. Isikweletu Sezithombe: I-Elobserver
Ijoyina U-Peñarol wamsiza wathuthuka ngokushesha, wamnika ukuqashelwa kwezwe eminyakeni yakhe yobusha. Ngaphakathi kwe iminyaka emibili yokuzijoyina, inkanyezi ekhuphukayo yathola ucingo eqenjini lesizwe lase-Uruguay U15.
Ngesizini ye-2015-2016 ngenkathi besesePeñarol academy, uFede wahlangana neqhawe lakhe Diego Forlan ojoyine iqembu eliphakeme lekilabhu kwi-10th kaJulayi 2015. Legend yase-Uruguayan eyayiseduze kokuthatha umhlalaphansi yasebenza njengobaba wayo.
Hlangana neFederico Valverde's Idol- Diego Forlán. Lapha, kuvela ukuthi basanda kuphetha iseshini yokululeka. Isikweletu Sezithombe: I-Marca
Diego ForlÃ¡n ululeke uFede kakhulu emsebenzini wakhe osemusha, emtshela ukuthi asebenze kanzima futhi athobeke. Kungekudala, uFederico owayesanda kuphothula iziqu zakhe wajoyina isithombe sakhe eqenjini elikhulu leqembu. Ukucebisa akuzange kunikeze impumelelo kuFederico Valverde. Kwakuyimpumelelo ekhishwe kuye njengoba yena, kanye nesithombe sakhe (u-Diego Forlan) bemakwe futhi basiza uPeñarol ukuvikela indondo yePrimera División 2015-16.
UFederico Valverde kanye nothisha wakhe nesithombe baqondise uPeñarol kusihloko se2015-16 Primera División. Isikweletu Sezithombe: Instagram, I-Bolavip.
Ngaleso sikhathi uFederico wayene-17, isithombe sakhe (Forlan) bamshiya wayokwelinye ikilabhu, intuthuko eyamenza wazizwa ekhathazekile. Kodwa-ke, ukuwina iPremier Division kumenze waqashwa ngamakilabhu amaningi ase-Europe. KwakunguReal Madrid owavikela ngempumelelo ukusayinwa kwakhe. Le kilabhu imvumele ukuthi adlale eqenjini layo lentsha (iReal Madrid B) lapho alwelwa khona indawo eqenjini lakhe eliphezulu lokuncintisana.
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ekudumeni
Ngesikhathi ngiseReal Madrid B, uFederico wabizwa ukuzomela izwe lakhe kwiNdebe Yomhlaba wonke yeFIFA U-20. Ukuhamba kuka-Uruguay kulo mqhudelwano kuchazwe kahle ukuzivikela okuqinile kanye nebala elisezingeni eliphezulu eliholwa nguyena omunye umuntu ngaphandle kukaFederico Valverde.
Ngemuva komqhudelwano, uValverde uqhubeke nokuthola umncintiswano weSilver Ball. Okufanekiselwe ngezansi kuye eceleni Dominic Solanke kanye ne-Yangel Herrera- abawinile be-Adidas Gold kanye neSiliva Ball ngokulandelana.
UFederico Valverde uzuze i-Adidas Gold Ball kwiFIFA U-20 World Cup 2017. Isikweletu Sezithombe: FIFA
Esikhundleni sokukhubeka ngemuva komqhudelwano, lo mdlali wasesiswini wasuka emandleni waya emandleni, wazitholela iqembu eliphakeme leReal Madrid. Ukuze abe ngumphikisi weqiniso weqhaza le-Real Madrid, waqoma ukuya nokuthola ulwazi kwenye indawo, ethatha inketho yemalimboleko kuDeportivo La Coruña, iklabhu elimenze wavuthwa.
Komunye wemidlalo kaDeportivo bebhekene neFC Barcelona, ​​uFede wadlala kahle kakhulu, i-feat yona yathola Luis Suarez egijimela ezansi egumbini lokugqoka likaLa Coruña ukuze ambingelele futhi agqoke ihembe lakhe.
Return from Loan: Lapho ebuya ebolekiswe, uValverde waqala ukuhlaba umxhwele umphathi wakhe omusha uJulen Lopetegui ngesikhathi sangaphambi kwesizini ye2018 / 2019. Ukusebenza kwakhe kumbone ethola isikhundla kabusha eqenjini lokuqala leReal Madrid. Ngemuva kukaLopetegui, umphathi olandelayo I-Santiago Solari futhi wahlabeka umxhwele ngokubaluleka okukhulayo kukaValverde nokuvumelana nezimo neqembu. Ngokushesha phambili esikhathini sokubhala, uFederico uzivumelanise kahle neReal Madrid, wathuthuka ngokuxhuma kanye nemingcele kuyo yonke inkathi ye-2019 2020.
UFederico Valverde manje usephakeme futhi waba namandla endimeni yakhe yaphakathi nebhola neMadrid. Isikweletu: I-90Min
Yebo, thina balandeli bebhola sisemkhawulweni wokubona inkanyezi ekhuphuka iqhakaza ibhulashi lomhlaba lomhlaba eliphambili phambi kwamehlo ethu. Federico Valverde ngempela munye, phakathi komugqa wokukhiqizwa ongapheli wabadlali abasemaphakathi bebhola emidlalweni ebhola lomhlaba. Akakulungele nje ukusikaza amahlombe Luka Modric futhi Toni Kroos kepha umbangi omkhulu wokuqothula noma ngubani walawa ma greats. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Emuva kwawo wonke umdlali webhola ophumelelayo, kuhlale kune-WAG engaba khona ezokhipha amehlo ayo futhi ifise ukukhonkotha indawo yayo njengentombi yakhe. Kulokhu kwaFede, impela kwakukhona inkosikazi ebukhazikhazi ihamba ngegama; Mina Bonino. Uyena (efanekiselwa ngezansi) waba yintombi yakhe ngemuva kokuthi uFederico eshiye intombi yakhe yakudala egama linguJuliet.
Hlangana nentombazane kaFederico Valverde's Girlfriend- Mina Bonino. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram
Ukuhlanganiswa kobuhle nobuchopho kuvame kakhulu phakathi kwezintombi zabathandi bebhola abathobekile. Lokho kukaFederico akuyona eyehlukile njengoba intombi yakhe ingumethuli we-TV ophumelelayo nentatheli. UMina Bonino wazalwa ngosuku lwe-14th ngo-Okthoba 1993 okusho ukuthi uneminyaka engu-5 emdala kunesoka lakhe elidumile. Ngubani onendaba empeleni !!… Ngemuva kwakho konke, iminyaka, njengoba besho, iyinombolo nje.
UMina Bonino ujabulele i-fanbase enkulu ku-Instagram enabalandeli abangaphezu kwe-250k ekhasini lakhe le-Instagram (ngesikhathi sokubhala). The brunette enhle ekhulisa ukuzethemba eceleni kwendoda yakhe kukho konke ukuhlwitha kwabo. Njengoba kuphawulwe ngezansi, bobabili bajabulela ubuhlobo obunempilo obakhelwe kuphela ebunganeni.
UFederico Valverde nentombi yakhe bathokozela ubudlelwane obuqinile obakhelwe ebunganeni. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram
Ngokungafani nomehluko weminyaka yabo, bobabili abathandi bazibona njengabangaphezulu kozakwabo noma abathandi kuphela - kodwa abangane abakhulu. Banakekelana ngokujulile omunye nomunye ne-forcourse, bayabathanda abanomona. Umhawu lo ngesinye isikhathi ungadala izimpi ezinenhliziyo elula phakathi kwalaba bobabili. Kwanele ukukhuluma !!... .. Manje ake sikunikeze umqondo!
Ngokuvumelana ne Ilanga, UValverde wake waqala impi yezinhliziyo ezinenhliziyo elula nentombi yakhe ngemuva kokumbona ukuthi ulayishe i-selfie ye-cheeky eveza iningi lezitho zakhe zomzimba ezibucayi ku-Instagram. Ukuphawula kwakhe kokuthunyelwe kuqoqe amakhulukhulu okuthandwa ngumphakathi ngemizuzu nje embalwa.
Lesi sithombe esidale impi elula phakathi kukaFederico nentombi yakhe- uMina Bonino. Isikweletu Sezithombe: Ilanga
Uthi bewazi?… U-20 oneminyaka engu-ubudala ngaleso sikhathi wayehlekisa ngentombazane yakhe engazange ihambe nayo ngisho nangemva kokulala ubusuku bonke, okusho ukuthi uyalugqoka usuku lonke. UMina Bonino uthole impindiselo yakhe ebucayi ngesikhathi efulathela ethi isoka lakhe lase-Uruguay alihambi njalo geza izingubo zakhe zangaphansi. Ngamazwi akhe;
"Yebo, ngithanda ukuba nesikibha esifanayo kodwa NGENGGCINA amabhulukwe afanayo NGESONTO njengawe."
Bobabili abathandi bathole abalandeli bakhathazekile ngesimo sobudlelwano babo ngemuva kokushintshana ngamazwi ngenhliziyo. Ngenhlanhla, ezinsukwini ezimbalwa kamuva, intombi kaFede uBonino yatshengisa abalandeli ukuthi akuyona imizwa enzima phakathi kwabo. Lokhu kubonwe ngesikhathi ethumela isithombe sabo ngamagama amnandi mayelana nothando lwabo olujulile ngomunye nomunye.
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi i-Federico Valverde Life Personal off the pitch kungakusiza ukuthola isithombe esiphelele sobuntu bakhe kude negama.
Ukuqala, ungumuntu onesimo sokuzimela sangaphakathi esivumela inqubekela phambili ebalulekile empilweni yakhe yomuntu siqu nobungcweti. UFederico kwesinye isikhathi unesidingo esijulile sokuchitha isikhathi eyedwa futhi kude nakho konke. Ukhetha ukuhlala ikakhulukazi olwandle ukuze azibuyisele ingcindezi yomsebenzi.
Ukuqonda impilo yomuntu siqu kaFederico Valverde kude nemisebenzi yebhola. Isikweletu: IG
Futhi empilweni yakhe, uFede ngumuntu onenhliziyo emnene, ongaphandle kwesigxobo wenza konke okudingekayo ukugwema ukungqubuzana. Ngokuqondene nezindaba zenhliziyo yakhe yesisa, ukukhetha kukaFede wokuba nentombi eneminyaka emhlophe ye-5 kunaye kufanelekile. Ungumuntu ongathandani nabalingani abangathembekile noma abangathembekile futhi ofuna ukuba nentokazi evuthiwe eqonda inqubo yayo enzima yansuku zonke njengomdlali webhola.
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Iposi elibekwe ekhaya lakhe selingumlando. UFede oseyindoda manje usigcinile njengesikhumbuzo ukukhumbula isipiliyoni sakhe sempilo yakuqala ngalo mdlalo. Namuhla, kumayelana nokubutha ukuhlonishwa kwakhe kanye neklabhu ekhaya lomndeni wakhe.
UFederico Valverde ofanekiselwe eceleni kwama-hounours akhe siqu naweklabhu agcinwa ekhaya lomndeni wakhe. Isikweletu: I-Marca
Okuningi ngobaba kaFederico Valverde: Ngaleso sikhathi, uJulio ubaba wakhe wayehlala emsebenzini ngenkathi unkosikazi wakhe enakekela indodana yabo. Namuhla, ubaba ohlonishwayo uyaziqhenya ngokuthi indodana yakhe isiphenduke indoda futhi ayisengumuntu osemusha owayevame ukuqeqeshwa. Ngamazwi akhe; “Inyoni Encane isiphenduke inyoni enkulu, okuthi lapho abaphikisi beyishaya, ivuke kalula iqhubeke”. Yize engenamandla kangako emsebenzini wakhe njengonkosikazi wakhe, uJulio (osesithombeni ngezansi) ungubaba othanda ibhola futhi uthanda ukuxoxa ngezinto zebhola nendodana yakhe.
UValverde uthola ithuba lokuthokozela nabazali bakhe- Ubaba wakhe, uJulio noMama, uDoris. Isikweletu: ovaciondigital
Okuningi ku-Federico Valverde's Mum: Ngesikhathi uFederico evakashela eYurophu, umama wakhe wabanga indima yakhe yokuba ngumama ngokuqinisekisa ukuthi yena nomyeni wakhe uJulio bamlandela eMadrid. Bonke babehlala eMadrid futhi waqinisekisa ukuthi uFede uyaqhubeka nokujabulela izitsha zakhe ezithandekayo.
UDoris waba nokuhlangenwe nakho okuhle ngenkathi ehlala eMadrid. Wena akaze aye eBernabau, esikhundleni sokuthi akhethe ukubukela indodana yakhe ekhaya ithelevishini. Kwakungokuhlangenwe nakho okuhlukile lapho eya esitolo noma esitolo sezitolo. UDoris ngenkathi esemakethe wayezwa abantu bephawula ngendodana yakhe. Lapho nje ekhuluma amagama, abantu bazofuna ukwazi ukuthi uvelaphi ngoba ithoni yakhe ihlukile. Masinyane uphendula ukuthi ungowase-Uruguayan, umbuzo olandelayo uzoba;
Ingabe ungumama kaFede Valverde?.
Isimo Samanje Sezinto: Kamuva, njengoba uFederico esevuthiwe ngokugcwele, abazali bakhe bahlongoza ukubuyela eMontevideo. Bavumele indodana yabo ukuthi iqhubeke nesipiliyoni sakhe saseMadrid kanye nomfowabo u-Diego. Lapho ebuyela ezweni lakubo, uFede watholela abazali bakhe umphako wamakamelo amane. Ubaba wakhe kanye nomame ngesikhathi sokubhala bakhona e-Uruguay futhi bafika bavakashele indodana yabo njalo ezinyangeni eziyisithupha.
Okuningi Ngobhuti kaFederico Valverde: Kuncane kakhulu okwaziwayo ngomfowethu kaFederico ohamba ngegama likaDeigo. Ngenkathi ugwema ukunakwa ngumphakathi, kungenzeka ukuthi u-Diego akenzi okunye ngaphandle kokunakekela umsebenzi womfowabo omncane.
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Ukwazi indlela kaFederico Valverde yokuphila kuzokusiza uqonde izinga lakhe lokuphila. Uma kukhulunywa ngemali, uFederico unethalente lokugcina ibhalansi phakathi kokuchitha nemali. Umholo wakhe wamasonto onke unele nje ukuthi awusebenzise ekunakekeleni umndeni wakhe ngenkathi eshayela imoto ehloniphekile. Lesi sithombe esingezansi sifingqa impilo yakhe yokuthobeka.
UFederico Valverde Car- Ufanekiselwa nomuntu obukeka njengo-Diego, umfowabo omdala. Credits: Tumblr kanye ne-Twitter
Amaqiniso weFederico Valverde Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Wake Wahlushwa Izinkinga Zezwi Nokuphefumula: Kuze kube yi-2016, uFederico Valverde wayenomsebenzi ophelele, waze waqala ukuba nezinkinga zokuphefumula. Lokhu kwalandelwa ukushintshwa kwezwi lakhe okungazelelwe kwabangela ukungakhululeki futhi kwacishe kwasabisa nomsebenzi wakhe.
UFederico Valverde wake waba nenkinga ngamaLungs akhe nePhimbo. Isikweletu: i-clevelandclinic, i-Wkipedia ne-Aidsmap
UFederico wasebenzisa lezo zikhathi eziyinselele nodokotela we-phoniatrics (uchwepheshe ofunda futhi ophatha izitho zomzimba, ikakhulukazi umlomo, umphimbo, izintambo zezwi, namaphaphu). Ngemuva kokuphumula isikhashana, umdlali webhola onenhlanhla wagcotshwa ngokuyisimangaliso ukuze aqhubeke nomsebenzi wakhe neReal Madrid.
I-Baby Club yakhe ithole i- $ 11,300 ngokudluliselwa kwakhe eMadrid: The Abafundi be-Union Club, lapho uFederico aqala khona emsebenzini wezingane wanikezwa u- $ 11,300 njengendawo yokuhlala yokwenyukela kwakhe kwiReal Madrid. Uthi bewazi?… bekuyimali edlulayo ebiza kakhulu iklabhu eyayike yathola emlandweni wayo. Lezi zimali zazisetshenziselwa ukulungisa uphahla lweqembu oluyavuza, amapayipi amanzi, ukufakwa kwamafutha phakathi kwezinye izinto.
Ukuphikisana Kwakhe Kuphela: UFederico uthole impikiswano eyodwa kuphela emsebenzini wakhe kuze kube manje (ngesikhathi sokubhala). Ku I-2017 FIFA U-20 World Cup Umdlalo wamanqamu wamanqamu bebhekene nePortugal, i-Uruguay ibonise ukubukeka kobuso njengoba isebenzisa iminwe yakhe ukwehlisa amehlo ngemuva kokushaya inhlawulo. Isenzo sakhe sathathwa njengebandlululo. Kwagxekwa amashumi ezinkulungwane zabalandeli bebhola emhlabeni jikelele. UFederico, ngesikhathi ebuzwa ngesenzo sakhe, uchaze ukuthi lo mgubho ngowomngane wakhe ne-ejenti yakhe egama lingu "el Chino" ISaldavia.
Wake wazizwa ebuhlungu njengo-Diego Maradona: Ntambama kaMeyi 19, i-1978 inomlando wayo. Ngawo lowo nyaka, umqeqeshi wokuqala wase-Argentina uCésar Luis Menotti washiya Diego Armando Maradona (u-17 osekhulile) ekukhetheni kwakhe iNdebe Yomhlaba. A impela ukucaphuka uDiego wakhala kakhulu futhi lokho kudumazeka kwamguqula.
Uthi bewazi?… UFederico naye wehlelwa yinto efanayo njengoba eye waphonswa iNdebe Yomhlaba ye2018 ngumqeqeshi wakhe uMaestro Tabárez. Unguye wayeneminyaka emibili kuphela ubudala kunenkanyezi yase-Argentina ngaleso sikhathi (1978). Ufunde kokuhlangenwe nakho kukaMaradona okwamenza waba namandla ngokwengeziwe. Ngesikhathi sokubhala, uFede ube yingxenye ephelele yeqembu lesizwe lesizwe elifinyelele ku-3 indebe yomhlaba esele. Ngenhlanhla, uthola iholo elihle njalo ngeviki, umholo ohlonishwayo waminyaka yonke, kanye ne-750 million euros ekhulula isigatshana.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Federico Valverde Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
ULucas Torreira Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts